ခန်ဓာကိုယျအတှကျ မီးသှေးရဲ့အသုံးဝငျပုံ (၇) မြိုး
HomeKnowledgeခန်ဓာကိုယျအတှကျ မီးသှေးရဲ့အသုံးဝငျပုံ (၇) မြိုး
မီးသှေးဟာ အဆိပျအတောကျနဲ့ အစာအိမျနာခွငျးကို ကုသပေးနိုငျတဲ့ သဘာဝဆေး ဖွဈပါတယျ။ မီးသှေးက သှားတှကေို ဖွူစငျစသေလို ဆားဝကျခွံကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အသားအရေ မညီညာမှုတှကေိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။
1. သှားကို ဖွူ စငျစတေယျ။
မီးသှေးမှာ လြှပျစဈအမဓာတျ ရှိတာကွောငျ့ အဆိပျတှနေဲ့ လြှပျစဈအဖို ဓာတျတှကေို ဆှဲဆောငျပါတယျ။ မီးသှေးက သှားခြေးတှကေို ပွောငျစပွေီး သှားကို ဖွူ စငျစပေါတယျ။ အခုဆိုရငျ မီးသှေးမှုနျ့ကို သှားတိုကျဆေးထဲမှာလညျး ထညျ့သုံးနကွေပါပွီ။ မီးသှေးမှုနျ့တှကေို ရစေိုနတေဲ့ သှားတိုကျတံပျေါ တငျပွီး2မိနဈခနျ့ တိုကျပေးရုံပါပဲ။ သှားတုတပျထားရငျ မီးသှေးက သှားတုတှပေျေါ စှနျးသှားနိုငျပါတယျ။ သှားဆရာဝနျတှကေတော့ မီးသှေးမှုနျ့က ကွမျးတာကွောငျ့ခဏခဏ အသုံးမပွုဖို့ လမျးညှနျထားပါတယျ။
2. မီးသှေးက ဝကျခွံနဲ့ ဆားဝကျခွံကို ပြောကျစတေယျ။
မီးသှေးက ဝကျခွံနဲ့ ဆားဝကျခွံဖွဈစတေဲ့ ဘကျတီးရီးယား၊ ဖုနျ၊ အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျပေးပါတယျ။ အသားအရေ ထိနျးသိမျးတဲ့ အခြို့ပစ်စညျးတှမှော မီးသှေးကို ထညျ့ပွီး သုံးကွပါတယျ။ မီးသှေးနဲ့ မကျြနှာကို ပေါငျးတငျလို့ရပါတယျ။ မီးသှေးမှုနျ့ လကျဖကျရညျဇှနျးတဈဝကျနဲ့ ရလေကျဖကျရညျ ဇှနျးနှဈဇှနျးကိုရောပွီး မကျြနှာမှာ လိမျးပေးရုံပါပဲ။ လိမျးထားတာလေး ခွောကျသှားရငျ မကျြနှာသဈလိုကျလို့ ရပါပွီ။ မီးသှေးမှုနျ့နဲ့ ရထေဲကို ရှားစောငျးလကျပတျဂယျြလျ2ဇှနျး ထညျ့ပွီး အသုံးပွုပေးလို့ ရပါတယျ။
3. အငျးဆကျပိုးမှားတှကွေောငျ့ ဖွဈတဲ့ ယားနာ၊ အဖုအပိမျ့တှကေို သကျသာစတေယျ။
ပြားကိုကျခံရတဲ့အခါ၊ ခွငျအကိုကျခံရတဲ့အခါ အနီးအနားမှာ လိမျးဆေးမရှိရငျ စိတျပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ မီးသှေးက အဆိပျအတောကျတှေ၊ ဓာတျမတညျ့တာတှကေို ပြောကျကငျးစပေါတယျ။ မီးသှေးမှုနျ့နဲ့ အုနျးဆီလကျဖကျရညျ ဇှနျးတဈဝကျကို ရောပွီး အဖုအပိမျ့ထှကျနတေဲ့ နရောကို လိမျးပေးပါ။ အဖုအပိမျ့တှမေပြောကျမခငျြး မိနဈ 30 တခါလောကျ လိမျးပေးရမှာပါ။ အဆိပျရှိတဲ့ အပငျတှကွေောငျ့ဖွဈတဲ့ ယားနာတှကေို ကုသရာမှာ မီးသှေးက ထိရောကျတယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ပွောပါတယျ။
4. မှိုကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ရောဂါတှကေိုလညျး ကာကှယျပေးတယျ။
မှိုတှကေ ကြောကျကပျ၊ အသညျး၊ ဦးနှောကျခြှတျယှငျးခွငျး၊ နှလုံးရောဂါ၊ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ အနျခွငျးနဲံ စိတျကခြွငျးတို့ကို ဖွဈစပေါတယျ။ ဓာတုပစ်စညျးတှကေ မှိုတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မီးသှေးကလညျး မှိုတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျတဲ့ သဘာဝဆေးပါ။ လကျဖကျဆီ၊ မုနျ့ဖုတျဆျောဒါ၊ ပနျးသီးရှာလကာရှညျ၊ မီးသှေးမှုနျ့တို့ကို ရောမှပွေီး မှိုတကျနတေဲ့ နရောတှမှော ထားပေးပါ။ 10 မိနဈကနေ မိနဈ 20 လောကျအထိ ထားပေးရငျ ရပါပွီ။
5. အသညျးနဲ့ကြောကျကပျတှကေို အဆိပျအတောကျ ဖွဈခွငျးကနေ ကာကှယျပေးနိုငျတယျ။
အစားအစာ၊ အိမျ၊ ပတျဝနျးကငျြ၊ အလုပျတို့ကနေ အဆိပျအတောကျတှေ နတေို့ငျး ရရှိနပေါတယျ။ အဆိပျအတောကျတှကေ ကိုယျအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးတှကေို လှမျးမိုးသှားနိုငျပွီး အသကျအရှယျ အိုမငျးတာကို မွနျစပေါတယျ။ ဓာတုပစ်စညျးတှနေဲ့ စီမံထားတဲ့ အစားအသောကျတှကေို စားမိရငျဖွဈစေ၊ သတ်ထုတှေ၊ အဆိပျအတောကျမြားတဲ့နရောမှာ အလုပျလုပျတာဖွဈစေ မီးသှေးဆေးတောငျ့လေး2တောငျ့ကို ကြောကျကပျနဲ့ အသညျးအတှကျ အရေးပျေါ ဆောငျထားသငျ့ပါတယျ။
6. ဆံပငျကို ဖုနျအညဈအကွေး ကငျးစတေယျ။
အလှအပ ပစ်စညျးတှနေဲ့ ဖုနျမှုနျ့တှကွေောငျ့ ဆံပငျက အဆီထှကျပွီး မတောကျပတော့ပါဘူး။ မီးသှေးမှုနျ့က ဆံပငျရဲ့ဖုနျမှုနျ့တှနေဲ့ အဆိပျအတောကျတှကေို စုပျယူပေးနိုငျပါတယျ။ မီးသှေးမှုနျ့ လကျဖကျရညျဇှနျး2ဇှနျး၊ သဘာဝ အသီးအနှံတှနေဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ခေါငျးလြှျောရညျတို့ကို ရောပွီး ခေါငျးလြှျောပေးနိုငျပါတယျ။ တဈခု သတိထားရမှာ ဆံပငျအရောငျ ဆိုးထားတဲ့သူက မီးသှေးမှုနျ့နဲ့ ခေါငျးလြှျောရငျ ဆံပငျအရောငျ ပွောငျးသှားနိုငျပါတယျ။
7. အစာခလြေမျးကွောငျးကို သနျ့စငျပေးတယျ။
လူတှဟော ဖုနျမှုနျ့တှကေို နစေ့ဉျရှူမိနပွေီး ဓာတုပစ်စညျးတှနေဲ့ စီမံထားတဲ့ အစားအစာတှကေို စားမိနတောကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဆိပျအတောကျတှေ စုမိလာပါတယျ။ မီးသှေးမှုနျ့ 10 ဂရမျကို အစားမစားခငျ 90 မိနဈအလိုမှာ သောကျပေးဖို့ ဆရာဝနျတှကေ လမျးညှနျထားပါတယျ။2ရကျလောကျ သောကျပေးရငျ ရပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ သနျ့စငျပွီး သခြောထုတျလုပျထားတဲ့ မီးသှေးမှုနျ့ဖွဈဖို့တော့ လိုပါတယျ။ မီးသှေးမှုနျ့ကို ဖြျောရညျအဖွဈ သောကျလို့လညျး ရပါတယျ။ တဈခု သတိထားရမှာက မီးသှေးက သောကျထားတဲ့ ဆေးတှရေဲ့အာနိသငျကို လြော့စပေါတယျ။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မီးသွေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံ (၇) မျိုး
မီးသွေးဟာ အဆိပ်အတောက်နဲ့ အစာအိမ်နာခြင်းကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ မီးသွေးက သွားတွေကို ဖြူစင်စေသလို ဆားဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသားအရေ မညီညာမှုတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
1. သွားကို ဖြူ စင်စေတယ်။
မီးသွေးမှာ လျှပ်စစ်အမဓာတ် ရှိတာကြောင့် အဆိပ်တွေနဲ့ လျှပ်စစ်အဖို ဓာတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ မီးသွေးက သွားချေးတွေကို ပြောင်စေပြီး သွားကို ဖြူ စင်စေပါတယ်။ အခုဆိုရင် မီးသွေးမှုန့်ကို သွားတိုက်ဆေးထဲမှာလည်း ထည့်သုံးနေကြပါပြီ။ မီးသွေးမှုန့်တွေကို ရေစိုနေတဲ့ သွားတိုက်တံပေါ်တင်ပြီး2မိနစ်ခန့် တိုက်ပေးရုံပါပဲ။ သွားတုတပ်ထားရင် မီးသွေးက သွားတုတွေပေါ် စွန်းသွားနိုင်ပါတယ်။ သွားဆရာဝန်တွေကတော့ မီးသွေးမှုန့်က ကြမ်းတာကြောင့်ခဏခဏ အသုံးမပြုဖို့ လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
2. မီးသွေးက ဝက်ခြံနဲ့ ဆားဝက်ခြံကို ပျောက်စေတယ်။
မီးသွေးက ဝက်ခြံနဲ့ ဆားဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား၊ ဖုန်၊ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ပေးပါတယ်။ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတဲ့ အချို့ပစ္စည်းတွေမှာ မီးသွေးကို ထည့်ပြီး သုံးကြပါတယ်။ မီးသွေးနဲ့ မျက်နှာကို ပေါင်းတင်လို့ရပါတယ်။ မီးသွေးမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်နဲ့ ရေလက်ဖက်ရည် ဇွန်းနှစ်ဇွန်းကိုရောပြီး မျက်နှာမှာ လိမ်းပေးရုံပါပဲ။ လိမ်းထားတာလေး ခြောက်သွားရင် မျက်နှာသစ်လိုက်လို့ ရပါပြီ။ မီးသွေးမှုန့်နဲ့ ရေထဲကို ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ်2ဇွန်း ထည့်ပြီး အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
3. အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ယားနာ၊ အဖုအပိမ့်တွေကို သက်သာစေတယ်။
ပျားကိုက်ခံရတဲ့အခါ၊ ခြင်အကိုက်ခံရတဲ့အခါ အနီးအနားမှာ လိမ်းဆေးမရှိရင် စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ မီးသွေးက အဆိပ်အတောက်တွေ၊ ဓာတ်မတည့်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ မီးသွေးမှုန့်နဲ့ အုန်းဆီလက်ဖက်ရည် ဇွန်းတစ်ဝက်ကို ရောပြီး အဖုအပိမ့်ထွက်နေတဲ့ နေရာကို လိမ်းပေးပါ။ အဖုအပိမ့်တွေမပျောက်မချင်း မိနစ် 30 တခါလောက် လိမ်းပေးရမှာပါ။ အဆိပ်ရှိတဲ့ အပင်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ယားနာတွေကို ကုသရာမှာ မီးသွေးက ထိရောက်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
4. မှိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးတယ်။
မှိုတွေက ကျောက်ကပ်၊ အသည်း၊ ဦးနှောက်ချွတ်ယွင်းခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အန်ခြင်းနဲံ စိတ်ကျခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဓာတုပစ္စည်းတွေက မှိုတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီးသွေးကလည်း မှိုတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေးပါ။ လက်ဖက်ဆီ၊ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ၊ ပန်းသီးရှာလကာရှည်၊ မီးသွေးမှုန့်တို့ကို ရောမွှေပြီး မှိုတက်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ ထားပေးပါ။ 10 မိနစ်ကနေ မိနစ် 20 လောက်အထိ ထားပေးရင် ရပါပြီ။
5. အသည်းနဲ့ကျောက်ကပ်တွေကို အဆိပ်အတောက် ဖြစ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။
အစားအစာ၊ အိမ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်တို့ကနေ အဆိပ်အတောက်တွေ နေ့တိုင်း ရရှိနေပါတယ်။ အဆိပ်အတောက်တွေက ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို လွှမ်းမိုးသွားနိုင်ပြီး အသက်အရွယ် အိုမင်းတာကို မြန်စေပါတယ်။ ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ စီမံထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားမိရင်ဖြစ်စေ၊ သတ္ထုတွေ၊ အဆိပ်အတောက်များတဲ့နေရာမှာ အလုပ်လုပ်တာဖြစ်စေ မီးသွေးဆေးတောင့်လေး2တောင့်ကို ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းအတွက် အရေးပေါ် ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
6. ဆံပင်ကို ဖုန်အညစ်အကြေး ကင်းစေတယ်။
အလှအပ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေကြောင့် ဆံပင်က အဆီထွက်ပြီး မတောက်ပတော့ပါဘူး။ မီးသွေးမှုန့်က ဆံပင်ရဲ့ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို စုပ်ယူပေးနိုင်ပါတယ်။ မီးသွေးမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း2ဇွန်း၊ သဘာဝ အသီးအနှံတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်တို့ကို ရောပြီး ခေါင်းလျှော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခု သတိထားရမှာ ဆံပင်အရောင် ဆိုးထားတဲ့သူက မီးသွေးမှုန့်နဲ့ ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံပင်အရောင် ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
7. အစာချေလမ်းကြောင်းကို သန့်စင်ပေးတယ်။
လူတွေဟာ ဖုန်မှုန့်တွေကို နေ့စဉ်ရှူမိနေပြီး ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ စီမံထားတဲ့ အစားအစာတွေကို စားမိနေတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ စုမိလာပါတယ်။ မီးသွေးမှုန့် 10 ဂရမ်ကို အစားမစားခင် 90 မိနစ်အလိုမှာ သောက်ပေးဖို့ ဆရာဝန်တွေက လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။2ရက်လောက် သောက်ပေးရင် ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သန့်စင်ပြီး သေချာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ မီးသွေးမှုန့်ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ မီးသွေးမှုန့်ကို ဖျော်ရည်အဖြစ် သောက်လို့လည်း ရပါတယ်။ တစ်ခု သတိထားရမှာက မီးသွေးက သောက်ထားတဲ့ ဆေးတွေရဲ့အာနိသင်ကို လျော့စေပါတယ်။